UMeander weMelero, isifiso sangempela semvelo | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Ezokuvakasha, España
Imander yeMelero ichazwe njengesifiso semvelo. Uyazi ukuthi ibizwa ngokuthi i-meander one ukugoba okubukhali yanoma imuphi umfula oshiya ingxenye yomhlaba ongena komunye nomunye.
Kepha, ngikhuluma ngeMelero, ijika lapho Umfula i-Alagón kuyisono kakhulu ukuthi icishe iveze isiqhingi. Kunoma ikuphi, dala ukwakheka kwezwe okuyingqayizivele okuhambisana ngokuphelele nezindawo zasendle kanye nemvelo ngokusemandleni. Uma ufuna ukuvakashela leli tshe eliyigugu esifundazweni sase Cáceres, sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Uphi umhambisi weMelero
2 Yini okufanele uyenze kumeander weMelero
2.1 Ukubona kwezilwane: ukugquma
2.2 Izindlela zokuhamba izintaba
3 I-geology encane: I-meander yakhiwa kanjani?
4 Uzovakashela nini i-meander yeMelero?
5 Yini okufanele uyenze ezungeze iMelero meander?
Uphi umhambisi weMelero
Njengoba sikutshelile, lesi simanga semvelo sitholakala ku- umkhawulo we-Extremadura noCastilla y León. Ngokuqondile, itholakala esifundeni saseCáceres se Las Hurdes. Idolobha eliseduzane URíomalo de Abajo, bese kuba ngumasipala wase Umgwaqo waseMorisco.
Ngakho-ke, indlela engcono yokufika kule meander ivela eRíomalo. Ngokulandelayo, ukufika kuleli dolobha, unemigwaqo emibili yesifunda. Uma uhambela enyakatho, efanelekile SA-225, ngenkathi, uma ukukwenza kusuka eningizimu, kufanele uthathe ifayili le- I-EX-204. Uma ususeRíomalo, une- ithrekhi yehlathi lokho kuzokusa ngqo kumhambisi weMelero.
Yini okufanele uyenze kumeander weMelero
Ngokusobala, into yokuqala ongayenza endaweni ye-meander ujabulele ubuhle bayo bendawo. Ukwenza lokhu, iphoyinti lendawo elihle kunawo wonke indawo yokubuka ebizwa Endala, lapho unombono ophelele ngqo walesi simangaliso semvelo.
Kepha ukuvakashela kwakho umhambisi weMelero nakho kukunikeza amanye amathuba amaningi. Ngokushesha ngemva kokushiya iRíomalo de Abajo, uzothola ubuhle ichibi lemvelo lokho kwenza umfula iLadrillar, lapho ungageza khona uphumule.
Ukubona kwezilwane: ukugquma
Ngemuva kwalokho ungalandela indlela ehamba phakathi kwezihlahla zikaphayini nezesikhumba ukuze ufinyelele kumbono oshiwo ngenhla. Uma usukwenzile lokhu, ngeke ukwazi ukujabulela umbono okhazimulayo we-meander. Futhi kuyindawo okubhekiselwa kuyo ukubona izinhlobo ezinjenge- inqe legriffon, lo unogolantethe omnyama noma i ukhozi oluboshiwe.
Ngokufanayo, akunzima ngawe ukwazisa ukuphuza kwezinyamazane ogwini lwase-Alagón. Futhi, ngesikhathi esifanele, kuyisimo esihle kakhulu sokubukwa ukubhonga. Njengoba wazi, leli yigama lesikhathi lapho izinyamazane zisekushiseni futhi ezihambisana nokwindla. Eziduna zikhipha imisinjwana futhi zishayisana nezimpondo zazo ukumaka indawo, okwenza kube nombukwane ohlukile emvelweni.
Ungase futhi ufune ukwehlela kumeander uqobo. Kulokhu, ngaphambi kokufika eLa Antigua, unemfoloko ekuyisa ngqo enkabeni yale nto yemvelo. Kuleli qophelo, ungajabulela futhi ukubuka okubanzi kwephaneli kwefayela le- ISierra de Béjar.
Kusuka edolobheni laseRíomalo uqobo kunemizila eminingana yokuqwala izintaba ezokuvumela ukuthi uthokozele izindawo ezinhle kakhulu ezakha i-meander nezindawo ezizungezile. Phakathi kwabo, okuthiwa I-Verea de los Aceituneros. Joyina indawo eshiwo nge Amakhoyili futhi kungamakhilomitha angamashumi amabili. Awukwazi ukukwenza ngezinyawo kuphela kodwa nangebhayisikili ngisho nangemoto. Kepha, noma kunjalo, ungajabulela amahlathi amahle e-coniferous.
El Melero ngenkathi eyomile
Enye indlela ebabazekayo yi IVerea Yabadobi. Ilula kakhulu, njengoba ingamakhilomitha amathathu ubude. Kuya, ngokunembile, kusuka eRíomalo kuya kumbono weLa Antigua futhi futhi kukunikeza izimila ezinhle.
Kanye nokwedlule, ungadlula kufayela le- Umzila weChorreón del Tajo, ogcina ngempophoma ehlaba umxhwele; lokho kwe La Isinyathelo de la Mora, lapho uzothola khona okuqoshwe emadwaleni njenge-petroglyph eyinika igama layo, nalokho kwe Umthombo La Teja. Ngamafuphi, eminye imisebenzi ongayenza ngenkathi uvakashele iMelero meander idoba futhi yehla ngesikebhe noma nge-catamaran. Zonke zisesimweni esingenakuqhathaniswa.
I-geology encane: I-meander yakhiwa kanjani?
Yize into ethakazelisa ngempela ukuthokozela ukwakheka kwayo okuhlukile, kuyathakazelisa nokwazi ukuthi le meander yakhiwa kanjani. Kunemibono ehlukahlukene mayelana nalezi zinto zemvelo. Kepha lowo ohlotshaniswa neGeology uthi imvelaphi yayo ihlobene nezithiyo phansi. Isibonelo, i-sandbar. Lezi zenza umsinga womfula, ukuwagwema, uphambukiswe. Futhi ukuguguleka komhlabathi kwenza umsebenzi osele ukulungisa leyo ndlela ehamba ngamanzi.
Uzovakashela nini i-meander yeMelero?
Noma yisiphi isikhathi sonyaka kuhle ukuthi uze uzobona imander. Kodwa-ke, sikweluleka ukuthi ukwenze ngenkathi yezikhukhula yomfula i-Alagón, okuyi, e intwasahlobo noma ukuwa. Isizathu silula: njengoba umfula uthwala amanzi amaningi, ijika kanye nesiqhingana esiseduze nokuqeda kuyanconywa kangcono.
Yini okufanele uyenze ezungeze iMelero meander?
Njengoba sikuchazile, lesi simanga semvelo siphakathi nendawo yesifunda sase Las Hurdes futhi ikakhulukazi kumasipala we Umgwaqo waseMorisco. Indlu yepulazi eseduzane noma isigodi esincane sasemaphandleni yiso URíomalo de Abajo, lapho ungavakashela khona isonto le-Our Lady of Sorrows, okuhlala isithombe sentombi nto enegama elifanayo, umgcini wasanta wedolobha.
URíomalo de Abajo
Kepha okugqamile kulezi zindawo zamapulazi zaseHurdan yi izakhiwo ezithandwayo. Izindlu zakhiwe ngamatshe e-slate kanti futhi nophahla lwakhiwe ngento efanayo. Ngokusho kochwepheshe, le ndlela yokwakhiwa kwezindlu ixhunywe ne-palloza esenyakatho-ntshonalanga yePeninsula futhi inomsuka wangaphambi kwamaRoma, ikakhulukazi iCeltic.
Ngakolunye uhlangothi, kwamanye amapulazi kumasipala waseCaminomorisco ungabona futhi izikhumbuzo ezithakazelisayo. Isibonelo ku ICambroncino une Isonto laseSanta Catalina noma iLas Lástimas, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX, okungenzeka ukuthi yisakhiwo sobuciko esibaluleke kunazo zonke esifundeni sonke.
Sengiphetha, i- umlingisi weMelero yakha indawo ehlukile nebabazekayo, isifiso sangempela semvelo. Futhi, eduze kwakhe, ungavakashela isifunda sase Las Hurdes, izwe lapho izakhiwo zalo zendabuko zivelele khona. Awuzizwa uthanda ukuhambela kule ndawo ye Extremadura? Kusele igxathu elilodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » UMelero meander
Amabhishi aseNudist ase-Almería okufanele uwavakashele